Igumbi eli-2 lokulala eliMhlophe kunye negumbi elilingeneyo. Coca & Cosy.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguWat + Irvine
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uWat + Irvine iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Molo kwaye wamkelekile!
Ukuba ujonge ikhaya elikude nekhaya, iApartment yethu ye-2 Bedroom lukhetho olugqibeleleyo. Ikumgangatho we-12 wendlu esanda kwakhiwa, ifakwe ngokupheleleyo ngesitayile sanamhlanje esincinci, esikhanyayo, esicocekileyo kwaye esithambileyo.
Kufuphi nee-CBD, iivenkile, zokutyela kunye neendawo zokuzipholela. Umgama wokuhamba ukuya kwizithuthi zikawonke-wonke (ibhasi yeTrans Jakarta kunye noLoliwe wabahambi baseJakarta).
Ifanelekile kwizibini ezitshatileyo, usapho / abahlobo abahamba kunye, abahambi bebodwa, abahambi beshishini, okanye abahambi bedijithali.
Indawo yokuhlala intsha kraca ngokhuseleko lweeyure ezingama-24
kunye nezixhobo ezipheleleyo zokuzisebenzisa SIMAHLA:
• Ijimu enezixhobo ezipheleleyo
• Isitudiyo seyoga (eneepropu zeyoga ezibalulekileyo)
• Amadama okuqubha amabini
• IiJacuzzi ezimbini zamanzi ashushu.
Ukuqinisekisa ukuba kulula kwakho, kukho:
Ii-Minimarts ezi-2 // ii-cafes ezi-2 // ii-canteens ezi-2 // ii-ATM // i-reflexology parlor // ivenkile yokuhlamba impahla efikelelekayo (1 USD/kg) // inkonzo yokucoca eyomileyo // inkonzo yokulungiselela kunye neposi
• Indawo yokupaka ehlawulelwayo kwizakhiwo.
Indawo yethu yokulala ye-2 yi-compact 45 sqm, kodwa yenzelwe ukubonelela ngeyona nto ikhululekile kwaye ikhululekile kubantu be-3. Inayo yonke into oyifunayo yosapho / yabahlobo kwisango lempelaveki okanye ukwenza uzive usekhaya ukude nekhaya.
• I-Wi-fi enesantya esiphezulu
• Isikhenkcezisi esineminyango emibini (namanzi asebhotileni aluncedo).
• Isikrini esisicaba esingama-32inch TV.
• Isofa, iicushion, kunye nekhaphethi.
Ifakwe ikhitshi eline:
• isitovu sombane
• iketile yombane
• ikofu kunye neti kwisitokhwe
• izitya zokupheka
• indawo yokutyela
Igumbi lokulala eliphambili line:
• Ibhedi entsha kraca yobukhulu bendlovukazi enesigqubuthelo seduvet nemiqamelo
• Indawo yokusebenza
• Iwodrophu enkulu yokugcina izinto zakho kakuhle.
Igumbi lesibini linayo:
• Ibhedi entsha kraca enesigqubuthelo seduvet nemiqamelo.
• Indawo encinane yokuhlala ngasefestileni ukuze uphumle kuyo.
• Itafile yokusebenza
Sikubonelela ngezinto eziyimfuneko zeshawari:
• i-shampoo // i-gel yokuhlamba // i-toothpaste // ii-towels ezi-3
• amanzi ashushu
Kukho i-balcony yokuba ukonwabele kusasa, emva kwemini nasebusuku
(enokuthi ibeneenkwenkwezi ngamanye amaxesha).
Indawo yokuhlala ibekwe eMT Haryono, ekumda we-East Jakarta, kuMbindi weJakarta, kunye naseMazantsi eJakarta ekunika iindlela ezahlukeneyo zokufikelela kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo. Ungafikelela kwi-CBDs njengeSudirman, iSenayan, kunye neThamrin malunga nemizuzu engama-20 uqhuba. Indawo yaseKemang, eneendawo ezininzi zokutyela ezintle kunye neekhefi, ikumgama oziikhilomitha ezisi-7 kuphela. Unokufumana ukutya okuninzi kwesitrato ebusuku kumgama ohambahambayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Wat + Irvine
Le yirenti yabucala, kwaye siyayihlonipha imfihlo yeendwendwe zethu. Oko kuthethiweyo, ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye unemibuzo malunga ne studio okanye iJakarta, singumbhalo / i-imeyile nje.
UWat + Irvine yi-Superhost
Iilwimi: English, Bahasa Indonesia, ภาษาไทย
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$344
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kramatjati